Ahoana ny fomba hisafidianana solosaina finday amin'ny famolavolana sary 2021 - Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Isaky ny manapa-kevitra ny hividy solosaina finday vaovao isika, dia iharan'ny fisalasalana. Lojika izany. Tsy ny rehetra dia mpahay siansa amin'ny solosaina na tena mahalala izay ilainy. Raha mpilalao lalao video ianao dia mila famaritana kely. Raha ampiasainao amin'ny famolavolana sary, ny hafa ary raha mitantana ianao, hafa ny hafa.
Raha ampiasaina amin'ny famolavolana sary dia mila hery lehibe ianao. Ny programa fitantanan-draharaha toa ny Excel dia tsy hitovy amin'ny programa famolavolana sary toa ny Illustrator. Ny fahalalana an'io dia hampitombo ny toetran'ny solosaintsika. Hanan-kery ny RAM, ny sary ary ny singa hafa toa ny efijery. Hiakatra izany dia toy izany no ny vidin'ny solosaina. Handrafitra ny toetoetran'ireo solosaina finday amin'ny fizarana samihafa isika, arakaraka ny vola tadiavintsika na azony ampanjifaina. Izany hoe, hanao solosaina ho fampisehoana farany ambany isika.
Hanangona ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fitaovana izahay solosaina ho an'ny famolavolana sary. Ireo ampahany tena ilaina ireo dia ho amin'ny toerana tsy azontsika atao farany ahilano ny firaka raha ny fahazoana solosaina finday tsara. Na dia mazava aza dia izy ireo no manana teti-bola avo indrindra.
1 Ny processeur, ati-dohan'ny fandidiana
2 Fahatsiarovana RAM
3 Ny karatra GRAPHIC, ilay singa tadiavintsika rehetra
4 Hard drive, SSD tsara kokoa
5 Fitaovana hafa
Ny processeur, ati-dohan'ny fandidiana
Ny tena zava-dehibe dia tokony hitantana izay rehetra manodidina azy. Tsy tokony hitahiry vola amin'ity lafiny ity ianao ary tsy maintsy misafidy mifanaraka amin'ny singa iray toa ny karatra sary izay horesahintsika avy eo.
Mora kokoa ny miaraka amin'ny rafitra Intel, mpikirakira be mpihanaka kokoa. Apple "namana" ary maodely marobe. Hamafisiko, satria misy ny processeur AMD, izay tsy dia misy 'laza', dia tena mety tsara ihany koa raha ampiasaina.
Amin'ity lafiny ity dia misy hevitra isan-karazany. Raha ny momba ny Graphic Design dia tsara ny maka processeur avo lenta, Ka samy tsy hanome olana anao izy roa. Eto manelingelina ny toe-karena. Ao amin'ny solosaina finday dia matetika no ahitantsika intel amin'ny alàlan'ny default mitady laptop miaraka amin'ny Intel i7 Processor (Miankina amin'ny taona ny taranaka sy ny hafainganana). Ary farafaharatsiny farafahakeliny processeur Intel i5 farany, saingy tsy maintsy tadidintsika fa ny Intel i9 Processor dia nivoaka, ka isan-taona izay mandalo azy dia ho any aoriana any aoriana. Raha mahita laptop miaraka amina processeur AMD ianao dia alao antoka fa AMD Ryzer 7 no miakatra.
Ny isan'ny cores sy ny zava-bitany dia zava-dehibe ihany koa. Ny programa sy ny asa sasany dia mahazo tombony amin'ny maro an'isa marobe, toy ireo izay misy ny fizotry ny fandikana, raha amin'ny tranga hafa kosa dia tsara kokoa ny hanana cores vitsy kokoa nefa manana hery lehibe kokoa.
Ny RAM angamba no singa miovaova indrindra. Ary nolazaiko izany satria tsy mila ny marika tsara indrindra ianao. Ny olana amin'ny solosaina finday dia sarotra ny mahafantatra hoe karazana RAM inona. Fa raha tsy maintsy fantarintsika tsara amin'ny tenantsika ny isan'ny gig sy ny hafainganam-pandehan'ny MHz ananany.
Ny kely indrindra ilaintsika dia 8 GB Fahatsiarovana RAM. Ary ny tena atolotra dia 16 GB. Amin'izany elanelam-potoana izany dia afaka misafidy ny 12 GB ianao. Miankina amin'ny toetran'ny solosaina findainy avokoa. Tokony ho 1600 Mhz ny hafainganam-pandeha satria efa antitra ireo teo aloha.
Ny karatra GRAPHIC, ilay singa tadiavintsika rehetra
Rehefa hividy laptop, ny zavatra tadiavinay voalohany dia marika iray milaza hoe inona ny karatra sary misy anao. Io marika mena avy amin'ny AMD io na ilay maitso mahazatra kokoa avy any Nvidia. Ny olona sasany aza diso hevitra amin'ny fiheverana fa io no zava-dehibe indrindra. Na dia mazava ho azy aza dia zava-dehibe izany, raha tsy raisina ireo singa etsy ambony dia tsy dia mendrika loatra izany.
Raha nijery ireo singa teo aloha isika fa marina, dia mila mijery an'io marika io isika. GTX na RADEON ary isa tsy manam-petra no hiseho eo amin'izy ireo. Ny carte graphique dia manohana ny CPU hanafainganana ny fikirakirana sary, ary ny fananana modely mety dia mahavonjy fotoana betsaka amintsika, ka tsy tokony apetrakao ankilabao ny safidinao.
Ny tena miely indrindra ary ilay atolotra ho an'ny mifanentana amin'ireo programa fanovana sasany dia i Nvidia. Amin'ity tranga ity dia mila mpanelanelana antonony na avo foana isika. Ny fahaizan'i Nvidia amin'ny endrika sary dia namorona ny laharana Nvidia Quadro. Raha tsy mahita solosaina finday miaraka amin'ity sokajy ity isika dia hitady Nvidia Geforce GTX. Amin'izany fomba izany no ahazoantsika antoka fa tsy hahita Karatra Grafika tafiditra ao amin'ny rafitray.
Hard drive, SSD tsara kokoa
Ny lanjan'ny programa rehetra ilainao hamboarina dia entin'ny kapila mafy. Manomboka amin'ny rafitra fandidiana. Eto no ilana mandanjalanja ho an'ny kapila mafy. Matetika ny mieritreritra sy manapa-kevitra amin'ny kapila mafy. Ho an'ny maro izay mitovy amin'ny kalitao sy ny fahamendrehana. Etsy ankilany, tsy misy lanjany ho an'ny solosaintsika. Ny hafainganam-pandehan'ny RPM sy ny fanafohezana SSD no teboka manan-kery indrindra hanapahana hevitra iray. Na dia marina aza fa ny solosaina finday misy kapila mafy HDD dia mazàna manana hafainganana 5400 rpm, ho an'ny 7200 rpm amin'ny birao iray. Ny kapila mafy SSD dia manana hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny HDD teo alohany.
Vokatr'izany dia lafo kokoa izy ireo ary mazàna mitondra fahaiza-manao kely kokoa. Fa ny fahaiza-manao dia azo amboarina amin'ny drive ivelany. Zava-dehibe fa rehefa mamoaka sary sy horonan-tsary izay hampiasanao amin'ny asanao amin'ny maha-mpamorona anao anao dia vita amin'ny fomba mivaingana ny fandikana. Arakaraka ny sakana tsy maintsy ataonao eo am-panatanterahana ny asa no mampidi-doza kokoa anao raha mihantona sy mamafa ny rafitrao ny rafitra.
Ny zavatra mety indrindra dia ny fananana kapila mangatsiaka kely SSD -128 GB- ary kapila matevina HDD an'ny habe ilainao.
Vantany vao nanapa-kevitra ny solosainao finday. Anisan'izany ireo singa rehetra etsy ambony tokony horaisina, Zava-dehibe ny fahafantaranao fa tsy mahazo aina kokoa ny solosaina finday rehefa mamolavola. Farafaharatsiny miaraka amin'ireo fitaovan'ny tompon-tany dia miresaka momba ny trackpad sy ny klavier amin'ny alàlan'ny default-.
Hiaraka aminy, takelaka toy ny Wacom Graphics Tablets mety ho fanampiana lehibe amin'ny famolavolana izany. Raha mbola tsy tena tianao ireto takelaka sary ireto dia afaka misafidy totozy sy kitendry ivelany ianao. Ilaina ergonomika no ilaina. Ary ny karazana keyboard dia hiankina amin'ny tsiron'ny tsirairay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba hisafidianana solosaina finday ho an'ny famolavolana sary
https://www.racocatala.cat dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara misaotra tamin'ny fampahalalana
Valio ny https://www.racocatala.cat
javierromera dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara misaotra amin'ny vaovao!
Hanomboka fampianarana multimedia sy haitao nomerika aho, mila solosaina finday ary tsy haiko izay safidiko. Manana ny takelaka sary xp-pen Deco Pro Para ho an'ny famolavolana sary aho. Manadihady izay ho solosaiko findainy manaraka aho (ho an'ny famolavolana sary sy ny asa famerenana sary, indrindra ny programa toa ny Photoshop, Illustrator ary Lightroom).
Inona no atoronao ahy?
Mamaly an'i javierromera
Tolotra tsy azo lavina: fonosana vokany amin'ny Photoshop amin'ny vidiny 90%